Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay fadhi gaar ah oo QM u qorshaysay Soomaaliya | Xaysimo
Home War Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay fadhi gaar ah oo QM u qorshaysay...
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay fadhi gaar ah oo QM u qorshaysay Soomaaliya
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey fadhi gaar ah oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya ayaa soo bandhigay dadaallada Dowladda ee kobcinta dhaqaalaha, dib u habaynta laamaha ammaanka, guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka ah argagixisada, dib u eegsita dastuurka iyo hirgelinta doorashooyinka.
Hoos ka aqriso khudbadda oo dhameystiran
Mudanayaal iyo Marwooyin, iyo dhammaan saaxiibbada Soomaaliya
Waxaa sharaf weyn ii ah in aan dhammaantiin idin kala soo qayb-galo kulankan heerkiisu sarreeyo ee arrimaha Soomaaliya kaas oo hareer socda kulanweyanaha guud ee Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay. Waxaan idiinkaga mahadcelinayaa sida aad u garab taagan tihiin dalkayga iyo shacabkiisa adkaysiga badan.
Kulankan waxa uu ku soo beegmay maalmo ka hor Madasha Iskaashiga Soomaaliya oo Muqdisho ka furmi doonta, waxaanan rajeynayaa in inta aan kulankan ku guda-jirno yeellan doonno wadahadallo iyo aragti isweydaarsi dhab ah oo ku aaddan horumarka dhaqan-dhaqaale, siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya, ka hor shirar wadatashi ah oo intan ka ba;laaran oo aynu ku yeellan doonno magaalada Muqdisho.
Waa muhiim in aynu isla ogaanno in Soomaaliya ay soo martay dariiq aad u dheer. runtii waa dhab middaasi. Heerkan aan joogno waxa sabab u ah dadaalka aan dhammaadka lahayn oo ay ku jirto dowladda aan hadda hoggaamiyo, taasi oo ay si daacadnimo ah uga go’an in la gaaro ahmiyadaha qarankeenna ee xasiloonida, soo kabashada dhaqaalaha, dowlad wanaagga iyo siyaasad loo dhan yahay. Caqabadaha Soomaaliya horyaalla ma ahan kuwo si fudud looga gudbi karo, balse dadaalkeenna dhinacyada badan leh ayaa caddeyn u ah in gaaritaanka guushu ay suurtagal haddii aan si wadajir ah ula shaqaynno shacabkeenna iyo saaxiibbadeenna caalamka si aan natiijo la taaban karo u wada gaarno. Tani waxaa daliil u ah horumarka muuqda ee aan ka samaynayno dib-u-habaynta dhaqaalaha, siyaasadda loo dhan yahay iyo dowlad wanaagga.
Dhawrkii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya si isdaba-joog ah ayay u soo kabanaysay iyada oo gacan ka heleysa beesha caalamka, iyo shacabka Soomaaliyeed oo garwaaqsaday in dhabbadii na soo gaartay ay ahayd mid aan lagu sii jiri karin. Tan iyo markii aan xafiiska imid, dowladdaydu waxay si wax-ku-ool ah u kaashatay beesha caalamka, oo ay ku jiraan Hay’adaha Maaliyadda ee Adduun-weynaha iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka. Waxaan hadda ku jirnaa heerka 4aad ee barnaamijka Hay’adda Lacagta Adduunka ee dayn cafinta, waxaanan ka barannay hawshan in isbeddello la sameeyo iyada oo marxalad adag lagu jiro aanay ahayn wax sahlan.
Iyada oo an u marayno qorshaha geeddi-socodka dib-u-habeynta dhaqaalaha dalka, waxaan xoojinnay awooddeenna maareynta maaliyadda iyo maamulka guud ee dhaqaalaha annaga oo ujeedkeennu yahay inaan kor u qaadno soo xeraynta dakhli gudaha ku filan oo aan ku daboolno kharashaadka ku baxa socodsiinta howlaha Dowladda Federaalka. Dadaalladeennu waxay horseedeen in sannad walba uu kordho dakhliga gudaha iyadoo si joogta ahna loo bixiyo dhammaan mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada qalabka sida.
Waxaan sidoo kale ku guulaysannay in aan ugu dambeyntii si rasmi ah u diiwaangelino dhammaan ciidamadeenna qalabka sida oo aan hadda ku jirno habkii aan dhammaantood u wada xaqiijin lahayn. Hadda, waxaan haynaa xogtii aannu u baahnayn si aan ugu jaan-goyno go’aannada maaliyadeed iyo kan dhaqaale ee daruuriga u ah sii wadidda isbeddelladan muhiimka ah si aan u gaarno ahmiyadda qaran ee xasilloonida iyo horumarka dhaqaale. Miisaaniyadda iyo kharash bixintayadu waa mid hadda la isku halleyn karo oo ku saleysan arrimo la isku raacsan yahay iyada oo aan ka cab bir qaadanno aragtida bulshada. Nidaamyada wax soo iibsiga ee dalka, oo uu sharcigu aas-aas u yahay, ayaa oggolaanaya tartan caddaalad ah in lagu saleeyo alaabada iyo adeegyada dowladdu iibsanayso. Shuruucda muhiimka ah ee maareynta dhaqaalaha oo qaarkood horyaallaan Baarlamaanka halka kuwa kalena la meelmariyay, ayaa xaqiijinaya in la helo horumar dhaqaale oo loo dhan yahay isla markaana waara.
Dib-u-habeyn dhaqaale iyo maaliyadeed suurtagal ma ahan haddii aanay jirin kalsoonida shacabka. Dowladdaydu waxay mudnaanta siisay maamul-wanaagga iyo wada-shaqayn buuxda oo lala yeesho muwaaddiniinta oo ay ku jiraan ganacsiga gaarka loo leeyahay middaas oo horseedday in dakhligeenna gudaha ee soo gala dowladda uu si xawli ah u kordho. Waxaa si buuxda nooga go’an inaan sare u qaadno daah-furnaanta, isla xisaabtanka heer shaqsiyeed iyo mid hay’addeed iyo inaan si toos ah ula falgalno shacabka si ay kaalintooda uga qaataan hannaanka dib-u-habaynta. Waxaan jecelahay inaan idinla wadaago inaan Sabti, 21-kii Sebtember 2019, saxiixay Sharciga La-dagaallanka Musuqmaasuqa kaddib markii Golaha Shacabka iyo xubnaha Aqalka Sare ay ansixiyeen.
Dadaalka aan ugu jirno dib u yagleelidda xiriirka aan la leennahay Hay’adaha Maaliyadeed ee caalamku waa mid miradhalaya, waxaanuna si adag uga hawlgelaynaa inaan xiriir buuxda dib ula yeelanno hay’adahaas, ka dib marka deynta nalaga cafiyo.
Dowladdayda waxaa ka go’an inay ka shaqayso dhammaan dhinacyada dib-u-habeynta u baahan si aynu u gaarno deyn cafin iyadoo aan raacayno nidaamka dalalka saboolka ee deymaha lagu leeyahay. In deynta la innaga cafiyo waxay mudnaan asaasi ah u tahay Soomaaliya, gaaritaanka hiigsiganina waxay ka mid tahay yoolka Dowladdan.
Dhinacayaga, waxaa naga go’an inaan si guul leh u dhammaystirno shuruudaha barnaamijka deyn cafinta ee Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF) iyo inaan dhisno hay’adaha lagama maarmaanka u ah daah-furnaanta iyo isla-xisaabtanka si loo joogteeyo horumarka dhaqaale iyo midka dhanka kobaca. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo kale ognahay in tani kaligeed aysan dammaanad qaadayn deyn cafinta. Qodobbada kale ee door weyn ka ciyaari doona deyn cafinta waa hadba sida ay uga go’an tahay deyn bixiyeyaasha inay sii wadaan inay Soomaaliya ku gacan siiyaan sidii aynu u gaari lahayn hiigsigan. Waxaan aad ugu faraxsanahay in ilaa iyo hadda, falcelinta ka dhalatay hirgelinta dib-u-habaynta miradhalka ah ee aan helaynno ay tahay mid dhiirrigelin leh. Si ay u suurtagasho deyn cafintu, waxaa lagama marmaan ah in falcelintan wanaagsan loo beddelo ficillo ay ka mid yihiin bixinta qoondada lacagaha deymaha Soomaaliya lagu leeyahay ‘Xilliga Go’aan Gaarista’ oo aan rajeynayno in ay tahay sannadka dambe horraantiisa, si waafaqsan Barnaamijka SMP ee Hay’adda Lacagta Adduunka. Sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dhammaan saaxiibbadeenna qiimaha badan, kuwaasi oo ay qaarkood deyn-bixiyeyaal yihiin, inay hormuud ka noqdaan dadaalka deyn cafinta ee Soomaaliya si ay noogu suurtagasho inaan dadka Soomaaliyeed gaarsiinno horumar waara.
Caqabadaha soo noqnoqda ee dhanka bini’aadamnimada ee ka dhaca Soomaaliya ayaa saameyn ku leh nolosha dadkayga. Waxaan uga mahadcelineynaa qurba-joogteenna, shacabkeenna dalka ku nool iyo beesha caalamka taageeradooda ku aaddan sidii looga hortagi lahaa caqabadaha iyo xaaladaha degdegga ah ee dhanka bani’aadamnimada. Aad ayaan uga xumahay in caqabadaha bani’aadamnimada ee Soomaaliya ay soo noqnoqdaan, walow aan dadaal badan ugu jirno inaan xoojinno adkaysiga dadkeenna iyo ilaalintooda, haddana suurtagal ma aha inaan keligayo wax ka qabanno caqabadaha jira maadaama oo loo baahan yahay dhaqaale joogto ah. Haa, waa run, dhaqaalaheenna ayaa la saadaalinayaa inuu sannadkan kobco 2.9% laakiin tan kaliya kuma filna inay daboosho baahiyaheenna. Sidaa darteed, biyo nadiif ah, nafaqo, wax-ka-qabashada cimilada, adeegyada guud ee bulshada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo in la helo hay’ado awood leh oo maareeya baahiyaheenna ayaa laga dheefayaa deyn cafinta Soomaaliya maadaama oo Hay’adaha Maaliyadeed ee Caalamiga ah laga helo doono dhaqaale. Sidaa darteed waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa dhammaan xubnaha sharafta leh inay nagala shaqeeyaan sidii aynu u gaari lahayn yoolkan qiimaha leh si dadkeennu uga baxsadaan dabinka horumar la’aanta iyo nugullaanta iyada oo lagu jaan-goynayo ahmiyadaha Qorshaha Horumarinta Qarankeenna.
Iyada oo la raacayo Qorshe Hawleedka Siyaasadda loo dhan yahay ee Dowladda Federaalka, waxaa naga go’an inaan qabanno doorasho Baarlamaan oo cod ah dabayaaqada sannadka 2020-ka. Tani waa mid ka mid ah qodobbada hortabinta u leh Dowladda ee 2020, isla markaana Guddiga Qaranka ee Madaxa-bannaan ee Doorashooyinku wuxuu ku socdaa dariiqii dalka lagu gaarsiin lahaa iyadoo diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha loo qorsheeyay in la sameeyo Maarso ilaa May 2020, kaddibna ay codeyntu qabsoonto ka hor dhadmaadka sannadka.
illaa iyo hadda, boqolaal goobood oo diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha ayaa la sahmiyey oo ku kala yaalla Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Gobolka Benaadir. Guddiga Doorashadu waxa uu rajeynayaan in uu dhawaan jaan-gooyo goobaha diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha ee dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Dabcan, goobahani waxay u baahan doonaan in laammaha amnigu hubiyaan ka hor intaan la daabacin liiska goobaha diiwaan-gelinta cod-bixiyeyaasha ee kama dambaysta ah. Guddigu waxay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo bahwadaagteeda u soo gudbiyeen muqulka qoraalka horu-dhaca ah ee hawlaha iyo kharashaadka diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha. Waxaan ku rajo weynnahay, iyada oo la kaashanayo beesha caalamka, inay noo suurtagasho qabsoomidda doorasho taariikhi ah.
Waqtigan xaadirka ah, Sharciga Doorashada iyo Xeerka Xisbiyada Siyaasadda ee wax ka beddelka lagu sameeyay, waxa ay horyaallaan Baarlamaanka waxayna sugayaan in la meel-mariyo ka hor dhammaadka sannadkan si loo suurtageliyo in Guddiga Doorashada ay bilaabaan diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha.
Dowladdu waxay kala shaqeyn doontaa Baarlamaanka sidii loo xaqiijin lahaa in Dowlad Goboleedyadu taageero siyaasadeed ka muujiyaan Sharciga Doorashada, iyo in la sameeyo wax ka beddelka lagama maarmaanka ah ee ay codsadeen Guddiga Doorashadu, si loogu ogolaado in ay doorashooyinka u qabtaan sida ugu hufan uguna qarash yar.
Amniga ayaa muhiim u ah hirgelinta doorashadan, laga bilaabo diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha. Dowladda Federaalku waxay ku hawlan tahay magacaabista Guddiga Amniga Doorashada si loogu gogol-xaaro qorsheynta amniga doorashada ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo codaynta. Doorasho nabdoon, lagu kalsoon yahay, waqtigeeda ku qabsoonta isla markaana hufan ayaa aas-aas u ah siyaasadda loo dhan yahay. In kasta oo aan dadaal badan ku bixin doonno in aan annagu maalgelinno doorashadaas, haddana waxaan kalsooni ku qabnaa taageerada saaxiibbadayada caalamka ee hawshan.
Amnigu waxa uu ka mid yahay arrimaha mudnaanta u leh Dowladdan, wax badan ayaanna qabsoomay in laga adkaado Al-Shabaab, militari ahaan iyo fikir ahaanba. Hawsha diiwaangelinta 19,000 ee askari waxa barbar socday guullo aan ka gaarnay xoreynta iyo dib u qabsashada deegaanno muhiim ah oo ka tirsan Shabeellada Hoose iyo deegaannada ku xeeran sida Sabiid, Mareeray, Caanoole, Bariire, Xarshanley, Ceel-Saliin iyo Aw-Dheegle.
Marka laga soo tago dadaallada militariga, Dowladdeennu waxay bulshooyinka deegaanka kala shaqayneysaa sidii deegaannadaas gacanta loogu sii hayn lahaa, dibna loogu dhisi lahaa, iyaga oo si buuxda looga talagelinayo, mudnaantoodana maskaxda lagu hayo.
Dhisidda ciidan qalabaysan oo si fiican u tababbaran oo la wareega mas’uuliyadda sugidda amniga Soomaaliya waa arrin waajib ah, Dowladdeenna oo kaashanaysa AMISOM iyo saxiibbada kale ee caalamka, waxay ku dadaaleysaa sidii ay uga miradhalin lahayd arrinkan iyada oo loo marayo Qorshaha Amniga Qaranka. Waxa sidoo kale socda isku-dhafka Ciidamada Qaranka taasi oo xaqiijinaysa amniga Soomaaliya iyo bedqabka shacabkeenna iyada oo loo marayo dadaallada ballaaran ee Dowladda ee dhinacyada kobcinta kartida bulshada, maaraynta maaliyadda, la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u habaynta iyo dowlad wanaagga.
Waxaan jecelahay in aan uga mahadceliyo ciidamada geesiyaasha ah ee Soomaaliya, AMISOM iyo saxiibbada kale dhiirranaanta, ka go’naanta iyo naf-hurnimada ay muujiyeen.
Waxaan ku faraxsanahay tallaabooyinka muuqda ee ay Dowladdaydu qaadayso si sare loogu qaado hannaanka doorashada, loo dardargeliyo dib u soo kabashada dhaqaalaha loona dhaqangeliyo Qorshaha Amniga Qaranka. Dhammaan saddexdaas dhinacba horumar badan ayaa laga sameeyay, waxaanna naga go’an inaan kuwo kale xaqiijinno. Ugu dambayntii waxa ugu muhiimsan waa in Dowladda Soomaaliya, shacabkeenna iyo saxiibbadeenna qiimaha badan ee beesha caalamku ay sii wadaan wada shaqeynta dhow ee ay Soomaaliya la leeyihiin. Dabcan, Dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedu mar walba iyaga ayaa howsha culeyskeeda qaadan doona si ay u horumariyaan dalkooda, balse waxaan sidoo kale kalsooni ku qabnaa taageerada joogtada ah ee beesha caalamka eek u aaddan in mustaqbalka la helo Soomaaliya oo aan deyn lagu lahayn oo ku sifaysan rajo, horumar iyo barwaaqo.